विवेक हरायो नेपालीमा ! सेक्युरिटी गार्डलाई नेपालीले नै कुटे – Bannigadhi Today
विवेक हरायो नेपालीमा ! सेक्युरिटी गार्डलाई नेपालीले नै कुटे
धनराज साउँद २०७७ साउन १९, सोमबार १८:१५
१९ साउन, काठमाडौं । मलेसियामा नेपाली सेक्युरिटी गार्डमाथि कु टपिट भएको घ टनाको थप विवरण खुलेको छ । केही दिनअघि एक व्यक्तिले सेक्युरिटी गार्डकै पोशाकमा रहेका एकजना व्यक्तिमाथि नि र्घात कु टपिट गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइ रल भएको थियो । उक्त भिडियोमा एक व्यक्तिले सुरुमा हात र त्यसपछि ल ठ्ठीले हि र्काएका छन् । घट नाको प्रारम्भिक अध्ययनका क्र ममा पी डित व्यक्ति नेपाली भएको थाहा भए पनि घट नाको अन्य विवरण खुलेको थिएन।
दूतावासले घट नाको अध्ययन गरेपछि थप विवरण सार्वजनिक भएको छ । उक्त घट ना गत जुलाई ७ तारिखमा बिहान १० बजे एमथ्री मलमा भएको र कुट पिट गर्ने व्यक्तिसमेत नेपाली भएको क्वालालाम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । दूतावासका अनुसार पीडित व्यक्ति नवलपरासीका इस्लाम हुसेन हुन् भने कु टपिट गर्ने कपिलवस्तुका राम गोपाल मुराउ हुन् । उनीहरु दुवैजना दूतावासको सम्पर्कमा आएका छन् । दूतावासको सम्पर्कमा आएका मुराउले हुसेनलाई कु टपिट गर्ने आफू नै भएको स्वीकारसमेत गरेका छन् ।
पीडित हुसेन सोही मलका से क्युरिटी गार्ड र कु टपिट गर्ने मुराउ सुपरभाइजरको रुपमा कार्यरत रहेको समेत खुलेको छ । मलेसियाको अध्यागमन कानूनअनुसार उनीहरु दुवैजना अवैधानिक कामदारसमेत रहेको पाइएको दूतावासल जनाएको छ । दूतावासमा उपस्थित भएका पीडक मुराउ सोमबार नै आफैं मेलेसियन प्रहरीसमक्ष उपस्थित भएका छन्। घटनाको थप अनुसन्धान क्वालालम्पूरको वाङ्सामाजु स्थित प्रहरीस्टेशनले गर्ने दूतावासले जनाएको छ ।अनलाइन खबरमा लेखिएको छ !